Sawirro: Dibad-bixii maanta ee Muqdisho oo kusoo koobmay haween iyo hoteel - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Dibad-bixii maanta ee Muqdisho oo kusoo koobmay haween iyo hoteel
Muqdisho (Caasimada Online) – Isu-soo-bax ay soo abaabuleen maamulka gobolka Banaadir iyo taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaa kulanka ka hadashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuulo Axmed Gaballe oo farriin culus u dirtay madaxda Soomaaliyeed ee ku shirsan magaalada Muqdisho, ayada oo ugu baaqday inay xal gaaraan.
Batuulo ayaa sidoo kale sheegtay in aysan doonin haweenka Soomaaliyeed in la baabi’iyo dowladnimada, sidoo kalena la burburiyo qaranimada Soomaaliya.
“Dowladnimada in la baabi’iyo ma ogolin, qaranimada in la burburiyo ma ogolin,” ayey tiri guddoomiye Batuulo Axmed Gaballe oo gabagabadii khudbad ka jeedisay goobta.
Soomaaliya ayaa hadda wajaheysa xaalad adag oo ka dhalatay muranka doorashooyinka, waxaana isha lagu wada hayaa natiijada shirka haatan u socdo Golaha Wadatashiga Qaran.